Ukutshintshiselana ngobugcisa kwenza i-kaiquan iqhubele phambili ngakumbi
Kutshanje, intlanganiso yonikezelo lwamanzi kwidolophu yokuhambisa amanzi kwimpompo yolondolozo lwetekhnoloji yenguqu kwitekhnoloji yotshintsho lwetekhnoloji evulwe ngokusesikweni, intlanganiso ibikhokelwa ngumbutho wamanzi wedolophu ye-guangxi kunye nomdibaniselwano wemibutho yokuhambisa amanzi usekela kamongameli u-mai xinfa, unobhala wombutho jikelele u-zheng jiarong wenze intetho ebalulekileyo nolondolozo lwamandla ukugaya. I-Shanghai kaiquan yamenywa ukuba ithathe inxaxheba kutshintshiselwano lobuchwephesha, ekomeleze ukuqonda kwekaiquan kwisebe lezamanzi.
U-Wang jian, usekela-Mongameli weqela le-kaiquan, wazise imeko yophuhliso kunye nolwakhiwo lwexesha elizayo nokucwangciswa kwe-kaiquan kwiinkampani zamanzi kwinkomfa, kwaye waphinda waziphinda iinkonzo ezintathu zasimahla ezinikezelwa liqela le-kaiquan kwiinkampani zamanzi.
1. Bonelela ngezisombululo zokonga umbane zeenkampani zamanzi simahla
Ngophando nophuhliso lweempompo zenyukliya, i-kaiquan iqokelele amava atyebileyo. Kule minyaka mithathu idlulileyo, yenze ukuphuculwa nokuphuculwa kweempompo ezisetyenziswa kwizityalo zamanzi. Iphumelele ngempumelelo impompo yokutsala kabini kunye noyilo olunamanqaku amaninzi kunye nobubanzi obuphezulu bendawo yokusebenza, inqanaba lokuhamba ukusuka kwi-70% ukuya kwi-120%, ukusebenza ngokukuko kunye ne-cavitation ephantsi. Ukongeza, i-kaiquan inokuqokelela abacebisi abangama-20 kwiqela, iingcali ezingama-260 zokubonelela ngamanzi kunye namashishini angama-600, kwaye inikezele ngezisombululo zobungcali zokonga umbane kwiinkampani zonikezelo lwamanzi ngokusekelezelwe kwizixhobo zayo ezinamandla.
I-Intanethi yasimahla + yegumbi lokumpompa kwigumbi elinolawulo olufikelelekayo
Ngokweemfuno zesebe lezindlu kunye nophuhliso lwasedolophini-nasemaphandleni, indlu yesibini yempompo iyakwenziwa ngokuthe ngcembe phantsi kolawulo olumanyeneyo nolwakhiwo olumanyeneyo, kwaye ukuphathwa kwendlu yempompo kube yindawo enzima. Kule meko, i-kaiquan ibeke ukufikelela simahla kwiqonga elinamafu elinobuhlakani, kunye nezinye iimveliso zabavelisi zinokufikeleleka ngokuphucula (iindleko azikho ngaphezulu kwe-3,000 yuan / set).
Kungekudala iKaiquan izakusungula impompo ehlakaniphileyo kunye nezixhobo zonikezelo lwamanzi ezi-smart, ukongeza kwimisebenzi yokubeka esweni ividiyo kunye nokusebenza kwemisebenzi, inkqubo yongeze ukuhambelana kwendawo efanelekileyo, isilumkiso sesiphoso, izixhobo zokusebenza zolawulo lomjikelo wobomi.
3. Simahla simahla ukufumana amanzi etepu ukubonelela ngesisombululo sesibini sokuhambisa amanzi kwigumbi lesisombululo
Emva kweminyaka engaphezu kwama-20 yamava kuyilo, ukwenziwa, ukuthengisa, ukusebenza kunye nokugcinwa kwezixhobo zonikezelo lwamanzi, i-kaiquan inezinto ezahlukeneyo zokuhambisa amanzi ezinje ngohlobo lwebhokisi ngaphandle koxinzelelo olubi, uhlobo lwetanki akukho xinzelelo olubi, uguqulo oluhlanganisiweyo oluhamba rhoqo, njl, ngemveliso yonyaka yeeseti ezingama-5000 zezixhobo zonikezelo lwamanzi, kwaye uthathe inxaxheba kwiiprojekthi ezininzi zokuhlaziywa kwempompo edolophini. Apha i-kaiquan ibonelela ngokubonisana simahla kwezobuchwephesha kwisebe lezamanzi elidinga ilizwe, liqhuba uphando simahla malunga nemeko ekhoyo yegumbi lempompo yokuqala, kwaye lisebenza nesebe lezamanzi ukusombulula iingxaki ezikhoyo kunye nobunzima kwigumbi elidala lokumpompa uluntu.